Guardiola oo laga doonayo inuu Messi keeno Stamford Bridge. - Caasimada Online
Home Warar Guardiola oo laga doonayo inuu Messi keeno Stamford Bridge.
Guardiola oo laga doonayo inuu Messi keeno Stamford Bridge.
Tababare Pep Guardiola ayaa ku tiirsanaanaya mar kale xidiga kooxda Barcelona Lionel Messi kaasoo ah ninka uu doonayo milkiilaha kooxda Chelsea Roman Abramovich hadiiba ay noqoto inuu Chelsea usoo dhaqaaqo tababarihii hore ee Barca, sida oo ogaaday wargeyska HamroFootball.com.
Pep Guardiola ayaa ka mid ah ragga ugui sareeya inay qabtaan shaqada Tababarenimo ee Chelsea taasoo uu haatan todobo bilood oo ku meel gaar ah ku hayo, Rafa.
Ilaha uu soo xigtay wargeyskaan ayaa sheegaya in Guardiola uu doonayo inuu Messi ku xoojiyo kooxda Blues, waana mida baa la leeyahay inuu Roman ku qanci karo, hadii uu ninkani noqdo macalinka Chelsea.
Pep ayaa xiriir wanaagsan kala dhexeeyaa Messi, Chelsea ayaana dooneysa iyadoo ku gambaneysa tababaraha reer Spain inay dalab u dirto Lionel Messi, kaasoo laga yaabo inuu sida ugu macquulsan ugu soo dhaqaaqo Galbeedka London.